Impi eLibya ingaphazamisa ukubuyisana – Bayede News
Impi eLibya ingaphazamisa ukubuyisana
INingizimu Afrika ibukeka inake indaba
Posted on 05/07/2019 05/07/2019 by Bayede-News
Kuxega amabhulukwe emadodeni njengoba iqale phansi idudulana ngenganono imihlambi eyalanayo eLibya
INingizimu Afrika ibukeka inake indaba yezigidi zaseLibya okuthiwa zithukuswe eNkandla
ISALOKHU iqhubekile imizamo ye-United Nations (UN) ibambisene ne-African Union (AU), i-European Union (EU), iLeague of Arab States namanye amazwe yokuthi kwakheke ukubuyisana kwemihlambi eyalanayo eLibya.
Le mizamo, eyaqala emuveni kokuqunjwa phansi kombuso nokubulawa ngesihluku kwalowo owayenguMengameli wezwe uCol uMuammar Gaddafi, inhloso yayo wukuthi kwakheke ukubuyisana phakathi kukaHulumeni obizwa ngeGovernment of National Accord (GNA) ozinze eNhlokodolobha namaphethelo namaqembu ahlukene abavukeli mbuso ikakhulukazi leli elibizwa ngeLibyan National Army (LNA) eliholwa yisikhondlakhondla uGeneral Khalifa Haftar.
Le mizamo iphinde ibhekiswe ukutheni leli zwe lithole ukuthula ukuze kubanjwe ukhetho obeseluhlehliswe amahlandla amaningana.
Ukuzimisela kwalezi zinhlangano ekufezeni lezi zinhloso kubonakala ngokuthi zilokhu ziqhubekile ukufakana imilomo nokuzama ukukhuluma ngazwi linye kweyokusombulula eyaseLibya. Isibonelo salokhu yizingxoxo ebezibanjwe ngoMgqibelo owedlule eTunisia lapho abaholi balezi zinhlangano benze izibophezelo zokuqhubeka nokunxenxa abaholi baseLibya ikakhulukazi iGNA neLNA ukuthi bahlale phansi baxoxe.
Kube semuva kwalo mhlangano lapho i-AU idalule ukuthi ihlela ukubamba ingqungquthela enkulu ngeLibya ngoNhlolanja nonyaka eyayizodingida umgudu leli lizwe okwakumele liwulandele ukuze kwakheke ukubuyisana.
Lesi sibophezelo se-AU sithakaselwe kakhulu ngoba sikhombise ukuthi noma ngabe yehluleka ukuhola izinhlelo zaphambilini ezazingagwema ukuthi izakhamizi zaseLibya zizithole zihlezi ngaphansi kwengcindezi nesihluku mihla namalanga, kodwa ayizibekile phansi emizamweni ekhona namuhla yokuthi leli zwe libe nokuthula.
Ukukhathazeka kwalezi zinhlangano ngelaseLibya kuphinde kudalwe ukuthi ukungabi khona kokuthula kuleli zwe kunemithelela eminingi kwezinye izingqinamba ezigcina sezikapakela kwamanye amazwe omhlaba.
Ezingabalwa kulezi zingqinamba ukuthi amalungu e-EU abona iLibya isiwumgudu wabokudabuka e-Afrika nakwamanye amazwe abafisa ukungena e-Europe ngokungemthetho.
Aphinde ayibone njengezwe lapho kubhace khona ontamoqinile asebeguqule leli zwe laba yisizinda sezigelekeqe ezishushumbisa izidakamizwa, izikhali nabathunjwa. Ku-AU, ikakhulukazi amazwe angomakhelwane neLibya, ukungabi khona kokuthula eLibya i-EU ikubona kuyichilo elizocekela phansi imizamo yokufeza izibophezelo ze-Afrika enokuthula i “Vision 2020”.
Lezi zinhlangano nabaholi bamazwe baphinde bakhalazele ukuthi uhwebo ngokwezimbiwa phansi eLibya ikakhulukazi uwoyela lusaqhubeka nokuthi lwenzeke ngaphandle ngokulandela imithetho nemigomo ebekiwe ezweni.
Lokhu kudalwa ukuthi amaqembu ahlukene alwayo nalawula izifundazwe ezahlukene ezweni azinqumela wona amanani nokuthi ngobani azohwebelana nabo. Lokhu kunemithelela entengweni kawoyela ngoba iLibya ingelinye lamazwe umkhiqizo walo kawoyela omkhulu kakhulu emhlabeni.
Okukhathaza lezi zinhlangano ngekawoyela wukuthi uHulumeni okhona (iGNA) uyehluleka ukulawula ngokugcwele ukukhiqizwa, ukulondolozwa, ukuvikela, nokuthengiswa komthombo wenzuzo osezweni.
Ngaphandle kokuthi lo Hulumeni ubhekene nezimpi ezithize namavukela mbuso ahlukene, iningi inkohlakalo ngaphakathi eyenza kube ikwampunzi idla emini kweyokuphathwa komnotho wezwe. Yizo zonke lezi zimo eziphazamisa ukusebenza kwamanye amazwe ezidala ukuthi lezi zinhlangano zizame ukuthola izivumelwano ezithile phambilini ezadala ukuthi kube nalo Hulumeni weGNA.
Le mizamo, okubalulekile ukuthi yesekwe, ibonakale sengathi izoshabalala njengoba ngesonto eledlule umholi weLNA uGeneral Haftar ezinze ezifundazweni ezizempumalanga yezwe, lapho kukhala isicathulo sayo, eyiphaka enhla nezwe ngenhloso yokuqumba phansi uHulumeni weGNA. Kuwo wonke amaqembu akhona eLibya, iLNA nomholi wayo idume ngokuthi ihlome iyizingovolo futhi inamandla okuqumba phansi uHulumeni weGNA.
Emuva kwesonto uHaftar eyiphakile, isalokhu itholene phezulu eLibya, noma amanye amaqembu neGNA bengazibekile phansi kodwa kuyabonalaka ukuthi iLNA yiyo enamandla. Le mpi esiqubukile isigxekwe kakhulu yilezi zinhlangano esezibaliwe ezisho ngazwi linye ukuthi kumele iphele.
Kodwa kunokuphambana kwemibono emazweni ahlukene ngokuthi yini okumele yenziwe ukuze imizamo yokwakha ukuthula ingashabalali ngenxa yale mpi esiqubukile.
Amazwe afana neRussia, i-Egpyt ne-United Arab Emirates (UAE) athathwa njengalawo aseka uHaftar bese kuthi i-United States of America (USA) ne-England athathwa njengaseka iGNA. Lokhu kwenza ukuthi laba abeseka iGNA baphakamise ukuthi akungenelelwe kule mpi kwesekwe uHulumeni, kepha lawa amanye aphikise ngokugcizelela kokutholakala kwendlela yokuthi le mihlambi ibuyisane.
Akwaziwa ukuthi iyozala nkomoni kulesi simo esimanzonzo eLibya kepha okucacile ukuthi emuva kwale mpi kuzoba nzima ukucabanga isisombululo esingayifaki iLNA. Lesi simo siphinde siphoqe i-AU namazwe angamalungu ayo ukuthi aqhubeke nezinhlelo zokuthi leli zwe libe nokuthula. Okudumazayo ukuthi eNingizimu Afrika, okungelinye lamalungu okumele libe neqhaza ngale mizamo ye-AU eLibya, ngenkathi amehlo amanye amazwe nezinhlangano eziningi ethe njo ekutheni le mpi eqale ngesonto eledlule ingamiswa kanjani, obeluhamba phambili kuleli zwe olwezinsolo zokuthi kunezimali okuthiwa zaphuma eLibya ngokungemthetho ngesikhathi sikaGaddafi okungenamthelela esimweni esibucayi eLibya.